Fampiharana ny lalàm-panorenana :: Hametra-pialana anio ny governemanta Ntsay Christian • AoRaha
Ho rava ny rafitra mpanatanteraka. Anio amin’ny 10 ora maraina, eny amin’ny lapan’Iavoloha no hanao fanambaràna milaza ny fametraham-pialan’ny governemanta tarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, ny Fiadidiana ny Repoblika. Ankamantatra ny momba ny fanendrena Praiminisitra vaovao sy ny ho avin’ireo minisitra roapolo ao anatin’ny governemanta.
Hiainga amin’ny fampiharana ny Lalàm-panorenana ny tohin’ny firafitr’ity andrimpanjakana ao amin’ny fahefana mpanatanteraka ity.
Ho fanajana ny Lalàm-panorenana mamaritra ny fametraham-pialan’ny rafitra mpanatanteraka aorian’ny fijoroan’ny Birao maharitry ny Antenimierampirenena no anton’izao fametraham-pialan’ny governemanta izao. Eo ihany koa ny fampiharana ny andininy faha-54 ao amin’ny Lalàm-panorenana, izay manome ny fahefana an’ireo solombavambahoaka maro an’isa ao amin’ny Ante­nimierampirenena hanolotra ny anaran’ny praiminisitra hotendren’ny Filohan’ny Repo­blika. “Ravaina aloha ny governemanta dia ho hita eo ny fampiharana an’ireo andininy isanisany mikasika ny fanolorana anarana ho Praiminisitra sy ny fijoroan’ny governemanta vaovao, aorian’ izany”, hoy ny loharanom-baovao iray avy eny Iavoloha. Tsy mbola fantatra mihitsy anefa raha toa ka hisy ny fano­loana ny Praiminisitra ankehitriny sy ireo mpikambana ao anatin’ny governemanta tarihiny na tsia.
Ny filohan’ny Antenimie­-­ram­pirenena vaovao, Razanamahasoa Christine, no efa nana­tsidika fa: “tokony ho hita taratra ao anatin’ny governemanta hijoro atsy ho atsy ny firafitr’ity antenimiera ity taorian’ny nahalany an’ ireo depiote ankehitriny ireo”.
Mamofompofona fikatsahana fizarana toerana arakaraka ny hery politika voasolo tena, etsy Tsimbazaza, io fanambaran’ny filohan’ity andrimpanjakana ity io.
Tamin’ny 24 janoary 2019 lasa teo, herinandro monja taorian’ny fianianan’ny Filohan’ ny Repoblika vaovao, Rajoelina Andry, no nijoroan’ny governe­manta am-perinasa. Roa andro talohan’izay no namerenana ny Praiminisitra, Ntsay Christian, teo amin’ny toerany. Namaritra fifanarahana herintaona tamin’ ireo mpikambana roa amby roapolo mandrafitra ny gover­nemantany voalohany ny Filohan’ny Repoblika, nefa ialohavan’ny tombana an-tenantenan-dalana izany, izay tokony efa hatao ato ho ato satria enim-bolana io tomba­nasa voalohany io.
Banga roa kosa ny gover­nemanta ankehitriny rehefa nametra-pialana noho ny firotsahan’izy ireo nofidiana tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ny minisitra vehivavy roa. Raha noheverina handeha haingana tokoa ny lamasinin’ny fahefana mpanatanteraka izay misy ny governemanta, dia tsikaritra ny fihisatry ny fana­tanterahana an’ireo voalaza fa: “velirano” mahakasika ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny. Asa raha amin’ izao vao tena hanaingana tokoa ny lamasinina !
Fandraisana ny Papa Francois :: Paroasy dimy no handray ireo vahiny avy any amin’ny faritra